B2B Podcasting 101 | Martech Zone
Mgbasa mgbasa ozi B2B 101
Tuesday, June 14, 2011 Sọnde, Septemba 30, 2012 Douglas Karr
Dịka ịnwere ike ịghọtala, anyị nwere ihe ngosi redio kwa izu nke na-ebi kwa Fraịde na 3PM. Tinye n'ọrụ BlogTalkRadio, a na-etinye ihe ngosi ahụ ma tinye Podcast na iTunes. Na mpụga nke ogo ọdịyo, BlogTalkRadio na-aga n'ihu karịa ihe m tụrụ anya ya.
Ka ị na-agagharị na forntanetị maka ndụmọdụ na Podcasting, enwere ọtụtụ ozi na ngwanrọ dịka Ọdịdị or Garageband ịzụlite gị audio na, Player na-embed na gị na saịtị, akụrụngwa ịzụta, na mgbe ahụ i nwere fumble site na ịdenye na na-ebugote ọ bụla Podcast na iTunes. Nke a bụ ọrụ dị ukwuu maka ndị otu anyị BlogTalkRadio bụ ngwọta zuru oke.
Na BlogTalkRadio, ihe niile anyi choro bu ezigbo igwe okwu na Skype jikọọ na ndị ọbịa… ị na-adịghịdị mkpa maka ndị ahụ, ị ​​nwere ike ịkpọ ekwentị gị ozugbo ma ị dị njikere ịga! BlogTalkRadio na-ewepụta kọntaktị ọhụrụ, na-enye gị ohere ijikwa ihe ngosi gị, ndị ọbịa gị, na egwu ndị ọzọ iji webata. Ọzọkwa, BTR na-enye gị ohere iwebata ihe ngosi gị na Facebook na Twitter ka e wee zipụ ọkwa ọkwa na-eduga na gosi (egwu di egwu).
Dịka ihe ngosi B2B, atụmatụ anyị dị iche na ihe ndị metụtara ndị ahịa:
Anyị anọghị mgbe ọnụ ọgụgụ dị elu nke ndị na-ege ntị… anyị chọrọ itolite ndị na-ege ntị na azụmaahịa na ndị ọrụ ụlọ ọrụ.
Anyị na-agbaso ndị isi ahịa na teknụzụ iji jikọọ na ngosi ahụ. Ọ bụghị naanị aghụghọ iji nwee aha buru ibu na ihe nkiri ahụ maka ndị na-ege ntị, ọ bụkwa atụmatụ iji hụ na a na-akpọkarị aha anyị n'otu mpaghara ahụ.
Anyị na-achụ ndị ahịa azụmaahịa na-arụ ọrụ na nnukwu ụlọ ọrụ. Yabụ, anyị na-ezubere ndị ahịa ka ha nọrọ na ngosi ahụ! Nke a nwere ike ịdị ka ajọ njọ, mana ọ na-arụ ọrụ ọfụma. Anyị ga-aga n'ihu na-eweta ndị isi ahịa na ụlọ ọrụ Fortune 500 na ihe ngosi ahụ. Ndị na-ege ntị ga-eji ha kpọrọ ihe ma nye anyị ohere ịme ka anyị mata ha ihe anyị na-eme.
Ebe ọ bụ na Podcasting adịghị mfe, ọtụtụ ndị edemede, ndị na-ede blọgụ, na ndị isi ụlọ ọrụ ga-awụli elu na ohere iji gosi ihe nkiri. Enweghi ọtụtụ pọdkastị dị ka ebe blọọgụ dị… ya mere ohere ị ga-anụ dị elu karịa. Ọ bụ maka ọdịmma ha kachasị mma (na nke gị) ịbanye na ngosipụta ndị ahụ.
Nke ahụ kwuru… anyị adịghị adọkpụrụ mmadụ na ihe nkiri iji ree ha. Anyị na-enye ha ndị na-ege ntị ịkwalite onwe ha, ụlọ ọrụ ha na atụmatụ ha yana ịnye ụfọdụ ndụmọdụ ma ọ bụ mkparịta ụka gbasara ya. Ọ bụrụ na onye ọbịa ahụ nabatara nzaghachi anyị, enwere ohere iji nọgide na mmekọrịta ahụ na-anọghị n'ịntanetị.
Anyị na-amata ebumnuche maka Podcast site na:
Inye ụdị kọntaktị na blọọgụ anyị. Ndị ọkachamara na-ahụ maka mmekọrịta mmadụ na ibe anyị na-akpọtụrụ anyị kwa ụbọchị na ọkwa - ọtụtụ n'ime ha bụ ohere dị ukwuu maka ngosi ahụ.
Chọta ndị na-ede blọgụ site na nyocha blog, PostRank na Teknụzụ ndị na-ekwu okwu n’otu isiokwu ahụ.
Choo Podcasters ndi ozo na mmemme dika iTunes na Stitcher.
Chọta ndị ode akwụkwọ ọhụrụ ewepụtara na isiokwu anyị na-ekwu maka ya. Ndị ode akwụkwọ na-anwa mgbe niile iwepụ okwu a na akwụkwọ ha na Pọdkastị na-enye nnukwu ohere. Ọtụtụ ndị ode akwụkwọ ga-awụli elu na ohere ahụ. Chọta saịtị ha ma jikọọ ha.
Na-akwalite ihe ngosi ahụ site na ijikọta ihe ngosi redio na blog gị na ibe na-elekọta mmadụ. Pọdkastị na-enye ndị mmadụ ohere dị ukwuu ịrụ ọrụ ma na-ege ntị listen ihe blog na-anaghị enye. na-ege ntị bukwara nnukota onu site na reading ebe i na-anu uda olu. O nwere ike inyere ndị na-ege gị ntị aka ịtụkwasị gị obi ngwa ngwa.
Onye Bụ Ndị Na-ege Gị Ntị n'Ezie?
Jun 15, 2011 na 9:35 AM
Hụ ihe ngosi gị n'anya, enweghị ike ijide ya na ndụ mgbe niile, ya mere ọ na-atọ ụtọ ịdata pọdkastị, wee gee ntị mgbe m nwere oge.
Anọ m na-eji aka edekọ ihe na Audacity na-agbatị oge, mana BlogTalk Radio dị mfe karị. M ka na-edezi usoro ikpeazụ tupu m bulite ya na iTunes ma amalitere m gụnyere njikọ nke ụfọdụ mmemme ndị ama ama na amụma anyị.
Anyị ga-amụta n'aka gị ka anyị na-anwa iwulite ndị na-ege ntị maka obere azụmaahịa anyị na Wednesde na 10:30.